Amanqaku kaGuy Goldstein kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UGuy Goldstein
UGuy nguMatshini wokuThengisa kunye noMsebenzi wokuSebenza. Itekhnoloji ye-G8 isebenzisa indlela ebanzi ye-hybride kwintengiso ezenzekelayo, ukuzoba zombini kwintengiso yesiko kunye namava okuthengisa ulwazi ukunceda abathengi ukuba baphumelele. Ukuthembela kumava kunye nohlalutyo i-G8 isebenza ngokusondeleyo nabaxumi bayo ukubonelela ngokulungeleleneyo, ukuthengisa okuxubeneyo kumashishini abaxhasi ngabanye.
Intengiso esekwe kwiAkhawunti kaMarketo: Into ekufuneka uyazi
NgoMvulo, Oktobha 10, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UGuy Goldstein
UMarketo ukhuphe imodyuli ye-Akhawunti esekwe kwiNtengiso (iABM) njengenxalenye yeenzame ezandayo zokuxhasa ngcono ubudlelwane kwezeshishini. Ngelixa isixhobo ngokwaso siyinguqulelo yokuqala kwaye sibonisa isithembiso esikhulu, kukho iindlela ezithile apho i-ABM isetelwe ukuguqula amashishini aqala ukusebenzisa iqonga. UMarketo uchaza izinto ezintathu ezahlukileyo kwisisombululo se-ABM: Ukukwazi ukujolisa nokulawula iiakhawunti kunye noluhlu lweakhawunti. Ukukwazi ukubandakanya ekujoliswe kuko